ङादी ग्रुप पावरद्वारा लगानीकर्ताका लागि दशैं खर्च | गृहपृष्ठ
Home लगानी ङादी ग्रुप पावरद्वारा लगानीकर्ताका लागि दशैं खर्च
on: September 20, 2018 लगानी
असोज ४, काठमाडौं (अस) । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १० प्रतिशत कर बाहेकको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै ङादी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेडले बिहीवार पाँचौ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । पारित नगद लाभांश शुक्रवारदेखि नै वितरणको तयारी गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक शैलेन्द्र गुरागाईले सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत लगानीकर्ताहरुलाइ दशैं खर्च व्यवस्थापनका लागि शुक्रवारदेखि नै तयारी गर्ने बताएका छन् ।
गत वर्ष नै पारित गरेको ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव आईपीओ जारी गरेको दुई वर्ष पुरा नभएकाले बोर्डले स्वीकृति नदिदा निष्कासन गर्न नसकेको उनले प्रष्ट पारे । हकप्रद निष्कासन प्रकृयाका लागि बोर्डमा निवेदन दिने प्रकृया अगाडी बढाएकाले अबको ६ महीनाभित्र निष्कासन गर्न पहल गर्ने गुरागाईले जानकारी गराए ।
सभामा कम्पनीका लगानीकर्ता चन्द्र नारायण श्रेष्ठ, शिवप्रसाद पौडेल र अमृतदास रञ्जितले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । लगानीकर्ताहरुले गत वर्षको वार्षिक साधारण सभा सबैभन्दा पहिला सम्पन्न गर्ने पहिलो कम्पनी भएकोमा बधाई दिँदै दशैंमा खर्च स्वरुप नगद लाभांश प्रदान गर्ने भएकोमा धन्यवाद दिएका थिए । कतिपय जलविद्युत कम्पनीहरुले विद्युत खरीद विक्री सम्झौताका लागि सरकारी निकायदेखि राजनितिक दलका नेताहरु समेतलाई भलाकुसारी गर्ने क्रममा निर्माण लागत बढेको खबर आइरहदा कम्पनीले यस तर्फ ध्यान दिएर अघि बढ्न समेत लगानीकर्ताहरुले सुझाव दिएका छन् । लगानीकर्ताहरुको सुझावलाई प्रबन्ध सञ्चालक शैलेन्द्र गुरागाईले प्रष्ट पारेका थिए । उनले कम्पनीको कार्य सञ्चालनमा कसैलाई भलाकुसारी नगर्ने कम्पनीमा ङादी पावर रहेको भन्दै लगानीकर्ताको हितमा कम्पनी सधै अगाडी बढ्ने उल्लेख गरे ।
बिहीवार सम्पन्न सभाले एक स्वतन्त्र सञ्चालक समेत रहने गरी संस्थापक तर्फबाट ४ र सर्वसाधारण तर्फबाट २ सञ्चालकको निर्वाचन गरेको छ । महिला तथा स्वतन्त्र सञ्चालकमा लक्ष्मी शोभा गोसाई निर्वाचित भएकी छिन् भने संस्थापक तर्फबाट डा. भोगेन्द्र कुमार गुरागाई, शैलेन्द्र गुरागाई, दिनेश गुरूङ र रविन सुवेदी तथा सर्वसाधारणको तर्फबाट सत्यनारायण प्रजापति र शक्ति सिग्देल निर्वाचित भएका छन् । कम्पनीको बिहीवार बसेको बैठकले निर्वाचित सञ्चालकबाट डा. भोगेन्द्र कुमार गुरागाईलाई अध्यक्षमा चयन गरेको कम्पनी सचिव टंक प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।
Hamle kate pauxu ta dashai kharchha 10 kitta matra Xa
ङादी ग्रुप पावरको नाफा २ करोड ७६ लाख
ङादी ग्रुप पावरको नगद लाभांश वितरण
ङादी ग्रूप पावर कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ७ असोज २०७५)
ङादी पावरको साधारणसभा बिहीवार, १० प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्ताव